Wasiirka Uga Raaxada Jacel Ugana Gaadhi Badal Badan Somaliland - iftineducation.com
iftineducation.com – waa qoraal xiiso badan oo aanu kusoo bandhigi doono lana magac baxay DIIRADA Shakhsi kasta oo ilaahay uu ku uumay dhulka ayaa waxaa uu iska leeyahay dabeecado u gaar ah, haddaba Golaha wasiirada somaliland ayaa waxaa ku jira shaksiyado dabeecado kale duwan leh waxaana jira in mid waliba uu ka helo wax aanu ka helin ka kale.
waxaa maanta iyo maalmaha soo socda aan idiin soo bandhigi doonaa barnaamij xiiso badan oo la magac baxay DIIRADA. Waxaynu ku soo qaadan doonaa wasiir walba waxa uu jecel yahay iyo sida ay bulshada somaliland ay u aragto dhaqankiisa inaga oo aan ku talaxtagayn oo ka eegayna dhanka fiican kana tagayna wixii xun.
wasiirka wasaarada warshadaha somaliland Abiib Diiriye Nuur (Timacad) ayaa maanta kusoo qaadan doonaa diiradeena wasiir timacad waa wasiirka ugu raaxada jecel wasiirada somaliland waana wasiirka ugu gaadhi badal badan, wasiirkan ayaa ah wasiir aad u jecel in uu wato gaadhi aan cid kale wadan wuxuuna gawaadhida gaarka ah uu u badala si aan la arag oo aan la maqal, wasiir timacad wuxuu bishii badalaa dhawr gaadhi waxaana la sheegaa in ay gaadhaan celcelis ahaan 5 gaadhi bishiiba, wasiirka ayaa la sheegay in uu gawaadhida marka uu badalyo uu u eego sifooyinkan soo socda:
1. Gaadhigan bodhigiisaa xun iga badal
2. Gaadhigani wuu gaaban yahay iga badal
3. Gaadhigan kuraas tiisu ma fiican ii ugu badal
4. Gaadhigani malaha GPRS iga badal iyo qaar kale oo badan.
Si kastaba ha ahaatee wasiir timacad waa wasiirka ugu raaxad jecel waana shakhsi ku haboon in uu raaxo jeclaado waayo xilka ayaa wareegto ah.
Daawo Sawirada maant Fannaanada Qaali Ladan iyo saygeeda Liibaan Jigjiga